Shirka Aayo-katashiga Beesha Maxamuuud Yoonis (Jibrir Yoonis) Iyo Qodabadii Ka Soo Baxay Halkan Ka Akhri – Heemaal News Network
Sida aynu kawada warqabno waxa ka jira isbadallo faro badan oo kala duduwan mandaqada aynu ku nool nahay ee soomaliland, haday tahay mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid waxbarasho ama guud ahaan ba mid horumarineed, waxa kale oo iyadna xusid mudan in uu jiro isbadel kale gaar ahaan xaga siyaasada taas oo ay doorashadii madaxtooyada somaliland inagu soo fool leedahay.
Wakhtiyadan oo kale waxa jira waxa afka qalaad loo yaqaan (period of political uncertainty-xiliyada isbadelka siyaasadeed ee aan la hubin/xaald kala guur) inkastoon ilaahay ka baryayno in uu si nabad galyo ah inuugu dhameeyo doorashadaa hadana kulankan wuxuu ahaa mid muhiim ah ahmiyadiisana leh, shirku wuxuu ka dhacey huteel haldoor ee magaalada borama 10ka bishan august 11, 2017 habeen ka jimcuhu soo galayay.
Tan iyo markii la uumay aadaanaha, waxa uu ku jiraa halgan iyo dadaal dheer oo uu kaga midho dhalinayo marba sida uu uga fal celinayo iyo sida uu ugu noolaanayo bii’adaha kala dudawan ee uu ilaahay ku uumay, waa qayb ka mid ah hab nololeedka bulshada.
Soomaaliyeed meelkasta oo ay degan tahay gaar ahaan umada reer somaliland. waa nidaamka beelaha waxa aynu kusoo wada caano maalney kadib markii aynu wayney fikir sax ah ama diin ha ku salaysnaado amaba mabda’a kale oo taa badelkeed aynu aaminsanahay islamarkaana ka midaysanahay.
Waxa la xusey in ay beeshu qabsatey arimo faro badan, horumar la taaban karana ka gaadhey meelo badan. waxa ay beeshu dal iyo dibad bixisay mudooyinkii u danbeeyay lacag dhan $ 100,000 oo dollar oo lagu maal galiyay xaga waxbarashada sida (deeq waxbarasho oo la siiyay) oo laga bixiyay jaamacad ardey tiro badan oo badankood ka baxay ama wali
Dhigta kuliyadaha kala duduwan ee jaamcada camuuud iyo jigjiga, waxa la dhisey dugsiyo waxbarsho magaalada sharafweyn, masaajid, goob caamifaad iyo ceel biyood. waxa iyadna
laga qayb qaatey magacaabistii degmada dharwanaaje oo beeshu ay bixisay lacag ka badan $ 10,000. waxa kale oo ay beeshu kharash badan ku bixisay diiwaan galintii iyo kaadh qaadashadii dhawaan ka dhacdey somaliland gaar ahaan
degmada borama ee gobalka awdal, dadka is diiwaan galiyay oo tiradoodu inta la ogyahay kor u dhaaftey 10,000 qof waxa kaadhadhkii qaatey isku celcelis 88% (boqolkiiba 85%).
xaga siyaasada waxa ay beeshu ka gaadhey meel fiican ilaa kursiga wasiirka wasaarada boosaha iyo isgaadhsiinta,
Wasiir maxamuud oo isagu doortey in uu iska nasto waxa ay beeshu uga mahadcelisay sidii uu ula soo shaqeeyay qaranka somaliland, taa badelkeed waxa ay talo ku soo jeediyeen in ay joogaan aqoonyahan siyaasiin da’a yar aad na u firfircoon oo badeli kara mustaqbalkana la shaqayn kara qaranka somaliland.
in lasii xoojiyo lana dardar galiyo qaadhaankii ay beeshu bixinjirtey si aynu uga wada qayb qaadano horumarka
bulshada aynu la noolnahay guud ahaan gaar ahaana beesha.